Macaamiil badan ayaa weydiin doona inta jeer ee la beddelo qalabka qalabka wax lagu duubo markii ay iibsadaan? Waxay u muuqataa in dareenka isticmaalaha dhibaatadan uu aad u sarreeyo. Maanta, fursaddan awgeed, waxaan jeclaan lahaa inaan si faahfaahsan kaaga jawaabo su'aalahan. Si taxaddar leh u falanqee, qalabka saxaafadda saliidda ...
Isticmaalka saliida 1. Cun. Waa mid ka mid ah saddexda nafaqo ee ugu waaweyn (karbohaydrayt, borotiin iyo saliid) oo jidhka bini'aadamku aanu u baahnayn inuu ka maqnaado. Isticmaalku waa mid ka mid ah calaamadaha heerka nolosha. Si loo bixiyo asiidh dufan oo muhiim ah, fiitamiinada milma dufanka iyo xaaladaha nuugista fiitamiinada, tamarta, hagaajinta fl ...
Isbarbardhiga hababka cadaadiska ee kala duwan
Waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo loo helo saliidda cuntada. Tusaale ahaan habka saxaafadda fur fur, habka saxaafadda hidda, habka soo saarista dareeraha iwm. Habka saxaafadda fur fur jirka ku jira la hal mar saxaafadda iyo double press, saxaafadda kulul iyo saxaafadda qabow. Ma ogtahay waxa ay ku kala duwan yihiin ...
Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Dhammaan Alaabooyinka Mashiinka Madbacada, Mashiinka Saliida Qabow, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Yar, Saliida Saliida, Saliida Saliida, Saliida Olive,